'Red Dead Kununurwa 2' Ine Serial Muurayi Mavari Thar Makomo - Mitambo
musha Horror Varaidzo Nhau 'Red Dead Kununurwa 2' Ine Serial Muurayi mavari Thar Makomo
'Red Dead Kununurwa 2' Ine Serial Muurayi mavari Thar Makomo
by Trey Hilburn III November 28, 2018 1,516 maonero
Varegerere zvakanaka kana iwe, seni, uchiri kungoona nemumakomo, mabani nemachakwi e Red Dead Redemption 2, ipapo iwe unoziva kuti kune zvakawanda zvekutsvaga kunze kwavo thar makomo. Izvo zviwanikwa zvinobva pane zvechihedheni kusvika kune dang-kurudyi kutonhora.
Chimwe chezviwanikwa izvi chaive kutanga mangwanani kunze kweValentine. Ndakaona kuwanda kwemagora akarembera, uye ndakafunga kuongorora. Ndakawana torso yega yakaturikwa kubva pachivako chebridge nemaappendage uye ura hwakazara pamusoro. Musoro wakadimburwa wakarovererwa padanda netsamba yakapetwa yakanamatira muromo wake. Mushure mekununura, ndakaona kuti yaive chidimbu chemepu uye ndakabuda nemisheni yekusvika pazasi peizvi.
Kune avo vanoziva vagara vanoziva mutambo, iwe unoziva iyo yakavhurika nyika ndeye freakin 'yakakura. Kutsvaga zvitunha zvitatu kuri kupindwa muropa uye tsono yakazara mune huswa mamiriro. Izvo hazvina kubatsira izvo, ini ndaive ndakapesana nekutarisa nzvimbo kumusoro online. Mimwe mamiriro emitambo ari kupa mubayiro kana uchinge wawana muviri, zvirinani ndezvedu.
Nekudaro, mushure mekumwe kutsvagurudza kwakazara ndaitungamira kune mamwe maviri anotyisa maficha ekuratidzira ekutanga. Imwe neimwe ine miviri yakagurwa uye nemusoro wakagurwa wakaremerwa nechidimbu chemepu.
Kana ikabatanidzwa pamwechete mepu inotungamira kune dutu repasi rizere nezvidimbu zvevanhu vakawirwa nenjodzi. Paanenge achitsvaga mukamuri yevarombo murombo Arthur Morgan anosvetwa ndokurohwa panze.
Arthur paanomuka, mutete, mutserendende, Edmund Lowery Jr akamira pamusoro paArthur achitsanangura kure gwaro rake, uye zvaakarongera mukomana wemombe ane nhamo.
Nenhanho shomashoma dzinofamba, Arthur anokwanisa kushandura matafura uye nekuuraya kana hogtie Edmund.
Icho chinotonhorera padivi chishuwo icho chaive chekutanga cheanotyisa ane hukama neIsita mazai akapararira mukati mese RDR2.
Ndeipi yave iri inotonhorera pasita zai iwe yawakagumburwa nayo? Regai tizive mune zvakataurwa!
Red Dead Redemption 2 iri kunze zvino kwese.